China Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Na-ejuputa Igwe Nrụpụta na andlọ Ọrụ | Runchen
Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Na-ejuputa igwe
A na-eji ya maka ijuputa ude, ihendori, ma ọ bụ mmiri-ice dị iche iche nke iko, cones. Standard igwe nwere ike na-emepụta nanị otu ụdị ice ude ngwaahịa, ma ọ bụrụ na-agbakwunye dị iche iche na ngwá ojii, dị iche iche udi cones na iko ice ude nwere ike-emepụta dị ka nke ọma.
Runchen Krunt-Z 12 bụ azịza ọnụ ala dị ala nke dabara adaba maka obere ụlọ ọrụ mmepụta ihe .Ọ nwere ike izute ndị ahịa na-enweghị ikike dị elu chọrọ .Ma ọ nwere ike mepụta ụdị ice cream dị iche iche dị elu .Ọ nwekwara ike iji ya maka nyocha ụlọ nyocha ma ọ bụ mmepe ice cream.
Ikuku iko na cup dispenser akụkụ, na ndị a ga-ama esịn fanye tub otu otu iche ichere ndochi .E nwere dị iche iche ndochi iche dabere na dị iche iche akụrụngwa dị ka ice ude, ihendori, ma ọ bụ mmiri-ice. Illingdị njuputa nwere ike ịbụ njuju zuru ezu, na-ejuputa oge, na ịpịcha ihe ọkụkụ (a ga-etinye otu ihe eji egbu ihe).Runchen Krunt-Z12 nwekwara ike ahazi ya na akụkụ ịchọ mma dị iche iche iji chọọ ice cream cream mma. Dabere na dị iche iche udi ngwaahịa, ọ nwere ike họrọ dị iche iche mkpuchi na-agbakwunye function.Also ike akara ngwaahịa site ịkpụ tupu fim.Mgbe mkpuchi na-agbakwunye ma ọ bụ akara, akụkụ nke ọpụpụ ga-ewepụ ngwaahịa ma wepụta site na igwe na-ejuputa iji kpoo oyi ngwa ngwa, rue mgbe juru.
Ọkọlọtọ KruntNwachukwu-Z12 etiti mee nke igwe anaghị agba nchara .Ngwe igwe na-ejuputa ya nwere ike izute ọkọlọtọ na ịdị ọcha dị elu. Ya na-emeghe etiti Ọdịdị nwere ike izere mmiri ịzọpụta rụọ ọrụ nke ọma na-kpochara conveniently.All components imewe gụnyere nozulu, sooks mwekota na mbanye akụkụ kwekọrọ na chọrọ nke mfe njikọ, nnọchi na ihicha.
Main mbanye usoro
Ugboro ugboro na-eme ka ndị na-agba ọsọ na ndị na-agbagharị agbagharị, ma na-achịkwa ntụgharị nke mpempe akwụkwọ modul na ọdụ ụgbọ elu na ala. Izipu oge mgbaama na PLC site na usoro mmemme rotary iji chịkwaa cylinder kpọmkwem, ma mee ka akụkụ niile rụọ ọrụ nke ọma.
KruntNwachukwu-C12 na-achịkwa igwe na-ejuputa rotary. Site na okwu PLC, enwere ike nyochaa mmepụta ude nke ọma, ma ngbanwe dị mma .Ọ nwere ohere nchekwa 2MB, ma nwee ike ịmalite ma ọ bụ kwụsị na akpaghị aka. Ọtụtụ iri ngwaahịa nwere ike mmemme tupu.
A ga-egosi data ngwaahịa na ihuenyo PLC .na njikwa njikwa niile nwere bọtịnụ aka na ngosi dijitalụ, na-enye ọrụ na nlekota.
Air Compressor System na agụụ System
Dabere na nri ịdị ọcha chọrọ, akụkụ niile maka ikuku Compressor ka emere site na ihe nke corrosion, lubrication .All valves na-anabata ọnọdụ eletriki ma wụnye ya n'ime etiti. All cylinder si Festo. Agụụ System akụkụ nke bụ maka lids dispenser na lids na-agbakwunye na-ahazi site ọkachamara valves.
KruntNwachukwu-Z12rotary na-ejuputa igwe na-ewepụta usoro nhazi dị elu na akụkụ ọrụ dị ike iji gboo mkpa nke mmepe ụlọ ọrụ ice cream. Nnukwu uru bụ na ọ nwere ọrụ karịa ụdị ọdịnala.
Ogwe siri ike karị：
Na-akwado iwusi ike na-eme ka igwe rụọ ọrụ nke ọma karịa ọdịnala.
Ọzọ anụ mbanye usoro ：
Iji Modular siwing na adiana dividers mee isi engine na-agba ọsọ ndị ọzọ mụ, ihe adaba inyocha na ndozi. Ọtụtụ ọdụ ụgbọ kpamkpam na-eji usoro ihe eji arụ ọrụ iji mee ka igwe na-agba ọsọ ma na mkpọtụ dị ala.
Temperaturenọgide okpomọkụ chocolate usoro chocolate
A na-eji teknụzụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mgbe niile na njuju ndozi iji zere ihe mgbochi na-akpata site na nkwado nke chocolate mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ala.
anyị na-enye ụdị dị iche iche. N'okwu a, enwere ike ịgbasa akụrụngwa n'ọtụtụ. N'okpuru bụ tebụl ntụnyere reference
Abịa na akụkụ ahụ mapụtara
Iji hụ na ọrụ igwe, Runchen Krunt-Z12 na-ejuputa igwe kwesịrị ka mma ịhọrọ akụkụ mbụ. Ọ bụrụ na ịhọrọ ndị ọzọ, ndị a ga-enwe ihe ejighị n'aka, na-eduga na akụrụngwa agbajiri. Biko kpọtụrụ tupu iji.
Usoro 1 ahịrị 2 ahịrị
ikike kwa awa maka Standard 2400 4800
ọsọ ọsọ （stoke / min） 10 ～ 45 10 ～ 45
ike 2 kW
ike nchekwa maka chocolate 25L
mkpuchi ngwaahịa 2-6ml
ngwaahịa arịọnụ 4-8ml
gas uka (na-enweghị mmanụ, mmiri) ≤2.0g / m3
ikuku oriri 1 m3/ min
arụ ọrụ mgbali (min) 6bar (87LB / anụ ọhịa anọ)
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -4000 Mkpụrụ igwe Na-agwakọta
Osote: Runjin © Krunt ™ -G4 Ice cream na-ejuputa igwe
Runjin © Krunt ™ -G4 Ice cream na-ejuputa igwe